မဟာ - အိမ်ခြံမြေ ရောင်းဝယ်ရေး "ပြင်ဦးလွင်" - Mandale, Myanmar
မဟာ - အိမ်ခြံမြေ ရောင်းဝယ်ရေး "ပြင်ဦးလွင်"
မန္တ္တလေး-လားရှိုး လမ်း, Mandale, 1111, Myanmar
"မဟာ" အိမ်ခြံမြေရောင်းဝယ်ရေး နှင့် ဆောက်လုပ်ရေး၊၊ (ပြင်ဦးလွင်)
၁. “မဟာ” အိမ် ခြံ မြေ ရောင်းဝယ်ရေး သည် ပြင်ဦးလွင်မြို့ ရှိ ခိုင်မာသော ကိုယ်ပိုင်မြေ များ ကို သင့်လျော် မှန်ကန်သော ဈေးနှုန်းများဖြင့် ပြန်လည် ရောင်းချပေးလျက် ရှိပါသည်။
၂. “မဟာ” အိမ် ခြံ မြေ ရောင်းဝယ်ရေး သည် ကြားခံ ပွဲစားမျာ လုံးဝ(လုံးဝ) မဟုတ်သောကြောင့် လူကြီးမင်းများ အနေဖြင့် မိမိတို့ ၀ယ်ယူလို သည့် မည့်သည့် မြေကွက်ကို မဆို သင့်လျော်မှန်ကန်သောဈေးနှုန်း များဖြင့် ၁၀၀% ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ၀ယ်ယူ ရရှိနိုင်ပါသည်။
၃. နိုင်ငံရပ်ခြားနှင့် ရပ်ဝေးမှ လာရောက် ၀ယ်ယူလိုသော လူကြီးမင်း များအတွက် သက်သာကောင်းမွန်စွာ နေထိုင်နိုင်ရေး နှင့် အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ သွားလာနိုင်ရေး အတွက် ကျွန်တော် တို့ “မဟာ” မှ Hotel အခန်း booking ၀န်ဆောင်မှု့ များ နှင့် ကားစင်းလုံးငှား booking ၀န်ဆောင်မှု့ များ ကို စတင် ၀န်ဆောင်မှု့ ပေးလျက်ရှိပါသည်။
၄. ထို့အပြင် “မဟာ” ဆောက်လုပ်ရေး မှလည်း ခေတ်မှီလှပသော တိုက်တာအဆောက်အဦးများ ကို လူကြီးမင်း များစိတ်တိုင်း ကျ ဆောက်လုပ်ပေး လျက်၇ှိပါသည်။
၅. လူကြီးမင်း တို့ ပိုင်ဆိုင်သော အိမ် ခြံ မြေ များ လုံခြုံမှု့ရှိစေ ရန် အတွက် သံဆူးကြိူးကာခြင်း၊ အုတ်တံတိုင်းခတ်ခြင်း၊ အစရှိသော ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကိုလည်း ဈေးနှုန်းချိုသာစွာ၊ အရည်အသွေးကောင်းမွန်စွာ၊ ဖြင့် ကျွန်တော်တို့ “မဟာ” မှတာဝန်ယူ ဆောက်လုပ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
ထို့ကြောင့် လူကြီးမင်းတို့၏ ခိုင်မာသောပိုင်ဆိုင်မှု့၊ မှန်ကန်သောဈေးနှုန်း၊ လှပခေတ်မှီသောအဆောက်အဦးများ အတွက် "မဟာ" အိမ်ခြံမြေရောင်းဝယ်ရေး နှင့် ဆောက်လုပ်ရေး၊ ကို အခုပင် ဆက်သွယ်လိုက်ပါ ခင်ဗျာ။
ရန်ကုန် - ၀၉-၄၂၂၄၅၃၄၈၅, ၀၉-၇၉၅၅၁၀၇၃၈ ။
ပြင်ဦးလွင် - ၀၉- ၉၇၀၈၃၄၄၉၈, ၀၉-၃၃၂၁၆၉၁၉ ,၀၉-၂၀၅၇၈၃၉, ၀၉-၂၀၀၀၈၂၃ ။
စင်္ကာပူ - ၀၆၅-၈၇၁၄၇၅၈၅